Foto 101 na Paul D'Andrea | Martech Zone
Foto 101 na Paul D'Andrea
Sunday, May 4, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mụ na Paul D'Andrea zutere mgbe m na-arụ ọrụ Kpọmkwem Ngwaọrụ. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị mmepe nwere ọgụgụ isi, Pọl nwekwara akụkụ okike, nka. Mmasị ya bụ foto. Otu n'ime Foto Paul nke Coyote na ebe a na-eli ozu n’obodo dị n'ime ọnwa nke a Akwụkwọ akụkọ Indianapolis Monthly Magazine.
N'oge ekeresimesi gara aga, mụ na nwa m nwoke zụtara a Igwefoto dijitalụ Nikon D40 SLR maka nwa m nwanyị, Katie. Katie na-enwe mmasị na ịse foto ma anyị chọrọ ịkwụsị ya. Mụ na nwa m nwoke, bụ́ Bill, banye egwu na imepụta egwu, Katie abụghị n'ezie onye ga-enweta nnukwu tiketi ihe. Ya mere Bill na m mere ya a Katie ekeresimesi ma melite ya na oru - azu paaki, igwefoto, anya di na nwunye, tripod… aha ya!
N'ehihie a bụ akụkụ nke ụbọchị ọmụmụ 14th nke Katie - ya akpa foto nkuzi na Paul. Ọ bụ ezigbo onye nkuzi - nwee ezigbo ndidi ma na-arụ ọrụ nke ọma. Nwa agbọghọ dị afọ 14 nwere ike ọ gaghị abụ nwa akwụkwọ kachasị mma, mana Paul meghere nghọta ya banyere igwefoto na ikike ya.
Mgbe ha mụsịrị ihe, Paul na Katie jere ije na Monument Circle ebe a na Indianapolis. Ọ bụ ụbọchị mara mma. Foto ndị Katie na nduzi Paul were dị egwu. Ndị a bụ ọkacha mmasị m taa. Ọ bụrụ na-amasị gị, lelee nke zuru ezu na Flickr.
Paul kwuru na nke a bụ nke Katie nwere mmasị na ya. O tinye ihe ncheta ahụ n'ime alaka osisi ụfọdụ nwere ọkụ na ha:
M mba photographer, ma mgbe m bulie Nikon ma gbaa gbaa onye ọ bụla n'ime ha dị ka ndị mara mma dị ka ndị a! Katie ga-ese foto ole na ole n'izuụka na-abịa wee soro Paul gaa nkuzi ọzọ iji nyochaa ha ma mụtakwuo ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị bi gburugburu Indianapolis ma chọọ ị nweta ọtụtụ ihe na Igwefoto Digital SLR gị, gbaa mbọ hụ na nye Paul oku maka ụfọdụ nkuzi!
Tags: ala mkpọsaala mobilegeographymkpanaka wordpressSocial Media Marketingégbè eluigweiche ihu igwewordpress mobile ngwa mgbakwunyeakpawpnuch pro
I Werela Myers-Briggs? ENTP?
Mee 5, 2008 na 4: 38 PM
Ihe osise di nma. Ọmarịcha njem m na-amasịkarị usoro ihe ncheta ahụ.
Mee 5, 2008 na 7: 43 PM
Daalụ maka post, Doug. M nwere a n'ezie oké oge na unu; anyị enweghịkwa ike ịrịọ maka ihu igwe ka mma. (Ma eleghị anya, ụfọdụ puffy n'ígwé ojii gaara mma. Clear-acha anụnụ anụnụ na mbara igwe na-emekarị ka nke na-agwụ ike backdrops. 🙂
Mee 6, 2008 na 3: 34 PM
Onyinye dị ukwuu; ọ dị ka ị nwere ọdịnihu “Anselette”N’aka gị. 🙂
Ma ewela iwe, foto mbụ m nwere na D40 nke m bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ bụ nnukwu igwefoto mana ọ na-ewe ezigbo mbọ iji mụta foto iji nwee ike ị nweta ezigbo foto na ya, mkpebi nwa gị nwanyị na-egosi n'ụzọ doro anya yana enyemaka Paul.
N'ime afọ gara aga enwere m mmasị na D40 m (foto m na Flickr) ma mụta tọn site na Nzute Photography Atlanta, nke dị ukwuu. Amaghị na ọ dị mma, mana ị ga-akpọrọ ya gaa Indianapolis Photography Meetup wee gbalịa.
PS Kpachara anya, ọ bụrụ na ọ banye n'ime foto ọ nwere ike karịa D40 na ọ ga-abụ oge maka ya ịkwaga n'ụdị Nikon ka mma, mezue ọtụtụ anya 1000 $ +. Ghaghi acho igbochi ya, ugbua?
Heh; asịkwa na adaghị m gị aka na ntị. 😉
Mee 6, 2008 na 7: 08 PM
Katie mgbe niile bụ ezigbo onye ndu, onye nhazi na onye omenkà. Enweela m mmetụta na ya na $ $ $! Anyị na-aga na-enweta ya a Nikon SB600 flash anya… na m n'aka na anya m na-esote. Paul akọrọ a lee anya na ya mbugharị lense nke nwere esịtidem gyro iji kpochapụ n'ikwe… chaị!
Anyị ga-enyocha nzute ahụ - daalụ maka njikọ ahụ !!!
Nwa m nwoke bụ onye egwu, yabụ m na-agbada n'okporo ụzọ ruo oge ụfọdụ na itinye ego dị mkpa n'ihe omume ntụrụndụ! Agbanyeghị, ekwenyere m na ndị a na-enyere ha aka iwulite obi ike ma na-eweta ụzọ okike nke ụlọ akwụkwọ anaghị eme mgbe ụfọdụ.